शुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम सबैभन्दा बढी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम सबैभन्दा बढी
बिहीबार, चैत्र ३१, २०७३ ०६:५७ मा प्रकाशित !
३१ चैत, काठमाडौँ। सरकारी निकायको महालेखा परीक्षणको वर्गीकरणमा अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बमोजिम बेरुजुको वर्गीकरण गर्दा यो वर्ष अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत ४२ दशमलव ४८ देखिएको छ ।
त्यसपछि नियमित गर्नुपर्र्नेअन्तर्गत ३१ दशमलव २८ र प्रमाण कागज पेस नभएको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत देखिएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सो प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको थियो ।
कुल तीन हजार ९४४ सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरेको सो कार्यालयले अशुल फछ््र्यौट गरी कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजु रकम यो वर्ष रु तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख पुगेको छ । गत वर्ष यो रकम रु तीन खर्ब २८ अर्ब ३८ करोड थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: निर्वाचनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह
NEXT POST Next post: काठमाडौँमा ७२१ जना निर्वाचित हुने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, चैत्र ३१, २०७३ ०६:५७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, चैत्र ३१, २०७३ ०६:५७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, चैत्र ३१, २०७३ ०६:५७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, चैत्र ३१, २०७३ ०६:५७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, चैत्र ३१, २०७३ ०६:५७